प्रधानमन्त्रीकी ‘छोरी’ ठिल्लेले अभाव र तनावका कारण विद्यालय नै छाडिन् ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS प्रधानमन्त्रीकी ‘छोरी’ ठिल्लेले अभाव र तनावका कारण विद्यालय नै छाडिन् !
प्रधानमन्त्रीकी ‘छोरी’ ठिल्लेले अभाव र तनावका कारण विद्यालय नै छाडिन् !
मुगु, १ चैत । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु एवं सांसदका साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले गरीब र असहाय परिवारका बालबच्चाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने एक समय फेशन नै चल्यो । तर ती अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका बालबालिकाहरुको अवस्था अहिले कस्तो छ ?